मैथिली भाषी जमातले आफ्नै लवजमा बोल्ने र लेख्ने काम गर्दै आए । परिणामतस् मैथिलीको नाममा सरकार र समुदायद्वारा उपलब्ध अवसरहरूमा उनीहरूको हालीमुहाली चल्यो । पद–प्रतिष्ठा प्राप्त गरे । पुरस्कार थापे । अन्य समुदाय झन्झन् टाढा हुँदै गए । उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कुनै प्रयास गरिएन । यो उपेक्षामा अज्ञानताभन्दा रणनीतिक उपक्रम बढी देखिन्छ । एकाधिकारको सुख भोग्ने कामना । र त्यसै अनुरुप आजसम्म हुँदै आएको पनि छ ।
अहिले केही हदसम्म भावनात्मक परिवर्तन भएको बाहिरी गतिविधिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्था सबैलाई समेट्ने उदारभाव जागेर आएको मलाई लाग्दैन । परिस्थितिजन्य बाध्यात्मक अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ । अचेल मञ्चमा दस जनामा एकरदुईजना इतर वर्गका प्रतिनिधिलाई पनि राखिहाल्ने परिपाटी चलेको छ । तर मञ्चको केन्द्रविन्दु उनीहरू नै हुने गर्छन् ।
सम्मान, पुरस्कार थाप्नेहरूका सालाना सूची हेरौं– दर्जनौंबीच कुनै एकरदुईजना इतर वर्गका स्रष्टा, अभियानी शौभाग्यशाली बन्न पुग्छन् । पदरप्रतिष्ठाको कुरा हो, यो अहिले पनि तिनै समूहका व्यक्तिहरूले हात पार्छन् ।
२. समुदायका इतर वर्ग्भित्र कुनै खास जात–जाति र तिनले बोल्ने विशिष्ट शैलीको भाषा (निश्चय मैथिली) कै कारण आफूलाई अलग–थलग मान्न विवश भइरहेका जनसमुदायलाई एउटा भाषाको नाम दिनुपर्ने ठूलो गृहकार्यपछि मगही भाषा ठम्याए र त्यसपछि मैथिली भाषीहरू ब्राह्मणेत्तर वर्गका केही युवा पिढी, जागरुक समाजसेवी, राजनीतिकर्मीहरू संगठित रूपमा मगहीको प्रचार–प्रसारमा लागे ।
नेपालको प्रारम्भिक र दुई दशक पहिलाको जनगणनामा यी दुई भाषाको अवस्था न्यून थियो भने २०६८ सालको जनगणनाले केही मात्रामा मगही देखाए पनि बज्जिकाको संख्या (७,९१,६४२ ) मा राम्रो बढोत्तरी भएको देखिन्छ । यदि यही अवस्था रह्यो भने अगामी जनगणनामा मगहीको संख्या ह्वातै बढ्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । गंगाको दक्षिणी क्षेत्रमा बोलिने मगही मध्य मैथिली क्षेत्रमा कसरी र्छियो ? प्रस्ट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भाषा वैज्ञानिकहरूको हैन र ? कुनै पनि भाषाको बढ्दै गएको अस्वाभाविक संख्याको पृष्ठभूमिप्रति चिन्तनशील हुनुको सट्टा अतिरञ्जित रूपमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सत्य केलाउनैपर्छ र त्यसपछि आउने समाधान निश्चय नै दीर्घकालीन हुनेछ ।
नेपालमा आजसम्म भाषा–वैज्ञानिक सर्भेक्षण गरिएको छैन । जनगणनामा गएका गणकहरू विज्ञ हुँदैनन् । उनले प्राप्त हलफनामालाई नै सामान्यतस् अन्तिम ठान्छन् । एकै परिवारका थरीथरीका मातृभाषा लेखाउनेहरू पनि देखापर्न सक्छन् । त्यसैले जनगणना अघि भाषाप्रति गम्भीर छलफल र दिशानिर्देश दिनु आवश्यक छ । मैथिली क्षेत्रमा मात्रै होइन, पहाडी क्षेत्रमा पनि भाषा सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ, त्यतातिर पनि समयमै ध्यान र्पुयाउनसके त्यो विवादलाई न्यून गर्न मद्दत हुनेछ । जनगणनापछिको विश्लेषण बैठकहरूमा यसबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श हुनु जरुरी हुनेछ ।
मैथिली भाषा आजको अवस्थासम्म आइपुग्न निकै दशकको कठिन दौडबाट गुज्रेको छ । यस्तै विकसित भाषाको अवस्थामा पुग्न अन्य नयाँ भाषाभाषीलाई कति दशक अझ संघर्ष गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन । ( स्रोत– लेखकको फेशबुक वालबाट)